एटीएम ह्याकले खडा गरेको बैङ्किङ सुरक्षाको बहस नेपालका बैङ्क : नाफामात्रै कमाउने, सुरक्षामा खर्चै नगर्ने ! – Nepali Update
एटीएम ह्याकले खडा गरेको बैङ्किङ सुरक्षाको बहस नेपालका बैङ्क : नाफामात्रै कमाउने, सुरक्षामा खर्चै नगर्ने !
१८ भदौ, काठमाडौ । बैङ्क भनेको हजारौँ सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने ठाउँ हो । बैङ्कमा चोरी हुँदा चोरिने भनेको तिनै निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम हो । यसकारण पनि बैङ्किङ क्षेत्रको घटनाले आम सर्वसाधारणमा पनि डर पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।बैङ्किङ क्षेत्रमा गत शनिबार भएको घटनाले आम निक्षेपकर्तालाई तनाव थप्यो भने बैङ्कहरुलाई पाठ सिकायो । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।